Banyere Anyị - Shanghai Comi Aroma Co., Ltd.
COMI AROMA bụ ụlọ ọrụ na-eweta nkwakọ ngwaahịa nke tọrọ ntọala na Shanghai, China na 2010. Isi ụlọ ọrụ na Shanghai, Factlọ ọrụ na Xuzhou, China. Kemgbe e bidoro, amatala anyị nke ọma maka Ngwaahịa Igwe Ọkụ Dị Elu, agbanyeghị taa, site na ịnweta karịa ọkụ ọkụ 25, anyị nwere ike ịnabata iwu nke ụdị, nha, na agba niile na nnukwu mpịakọta kwa afọ. Nke a na-enyere anyị aka ijere ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche gụnyere ịchọ mma, ịgbasa ozi, mmanụ na-esi ísì ụtọ, ọkpọ mmiri, na ọgwụ, na karama mmiri. Anyị na-emesi anyị obi ike na a na-arụpụta ihe ndị anyị na-eme na ngwaahịa anyị n'usoro kachasị mma ma dị na Amber, Green, Flint, na Cobalt Blue.
Kpọsị, COMI AROMA na-ebunye karama iko, akpa, yana ngwa ngwa zuru oke (okpu mkpuchi, nfuli mgbapụta, nfuli sprayer, esi ísì ụtọ Fiber, osisi rattan, ihe nkwụsị na mkpuchi). N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri nke ahụmịhe na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa, anyị na-enye ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa dị elu ma na-agbanwe agbanwe maka ịma mma zuru ụwa ọnụ na ụdị nlekọta anụ ahụ.
Facilitieslọ ọrụ ụlọ ọrụ anyị ọgbara ọhụrụ, na-agbaso ụkpụrụ US ma bụrụ ndị US gbaara agbazi ka anyị wee nwee ike igbo mkpa nke ndị ahịa ụlọ na nke mba ụwa. Tụkwasị na nke ahụ, COMI AROMA ejirila teknụzụ mkpuchi uzuoku na-ekpo ọkụ, teknụzụ mkpuchi oyi na-agba mmiri, na teknụzụ ọgwụgwọ mepụtara nke ọma. Ownlọ nkwakọba ihe nke 100,000 + nke anyị nwere ebe anyị na-echekwa ihe karịrị nde 50 nke ngwaahịa iji hụ na afọ ojuju ndị ahịa na ịnwe oge dị mkpirikpi.
A Jole njem na-atọ ụtọ, Ọrụ na-atọ ụtọ na COMI AROMA!